Nezvedu - Shenzhen Xinyuanjiaye Technology Co, Ltd.
SHENZHEN XINYUANJIAYE TECHNOLOGY CO., LTD yakavambwa muna 2011 uye iri muShenzhen, guta rakanaka remahombekombe. Iyo inyanzvi yemaski inogadzira neyakagadzirwa zuva nezuva kukwanisa kwemamirioni 1.5. Iyo ndeimwe yevakuru vemasiki vagadziri muSouth China. Pasi panowanikwa Masha Xuda High-tech Industrial Park, N. 49 North Education Road, Gaoqiao Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen.
Zvigadzirwa zvinosanganisira: masiki ekudzivirira anochengetedzwa, maseru ekurapwa anokaraswa, masiki ekupeta (KN95), nezvimwewo, kufukidza hutano hwehutano, chikafu neindasitiri yemakemikari, zvigadzirwa zvemagetsi, indasitiri yemakemikari yakajeka uye zvimwe zviitiko zvine hukama, izvo zvakakunda rumbidzo isingaenzaniswi kubva kuvanhu vane nzwisiso mu indasitiri. Izvo zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinoenderana nehunhu hwepamba uye hwenyika, uye zvigadzirwa zvinotumirwa zvinosangana nezvinodiwa zvetifiketi zveEU CE neUS FDA.
Seimwe yeiyo mutsva anotungamira mhando mumaski indasitiri, isu tine 100,000-level yakachena nzvimbo uye yepamusoro yekugadzira michina, yakasimba bhizinesi manejimendi, uye tinopa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakagadzikana. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, Africa, Canada, Japan, Southeast Asia nedzimwe nzvimbo